I-15th Century Chinese Explorer Cheng Ho
I-Chinese Famous Eunuch Admiral-Explorer yeli-15 leminyaka
Iminyaka elishumi ngaphambi kokuba uChristopher Columbus ahambe ngomkhumbi oselwandle olwandle ukuze afune indlela eya kwamanzi eya e-Asia, amaTshayina ahlola i-Indian Ocean kunye ne-Western Pacific kunye nohambo olu-7 lwe "Fleet Fleet" olwandisa ulawulo lweTshayina kwiindawo ezininzi ze-Asia kwikhulu le-15 leminyaka.
Iiflethi zeNgcaciso zalawulwa ngummeli onamandla onothenwa ogama linguCheng Ho. U-Cheng Ho wazalwa malunga ne-1371 eSinternet yangasentshona yePhondo laseYunan (ngasentla kweLaos) ogama linguMa Ho.
Uyise kaMa Ho wayengumSulumane waseHajji (owayesenze uhambo oluya eMecca) kunye negama lomndeni kaMa lalisetyenziswa ngamaSulumane ngokumelela igama elithi Mohammed.
Xa uMaha wayeneminyaka elishumi ubudala (malunga ne-1381), wabanjwa kunye nabanye abantwana xa umkhosi waseTshayina wahlasela iYunan ukulawula kulo mmandla. Xa wayeneminyaka eyi-13 waxoshwa, njengabanye abatsha amabanjwa, kwaye wabekwa njengomkhonzi kwindlu yonyana wesine waseKhayina (kubantwana abangamashumi amabini anesithandathu), uNkosana Zhu Di.
UMa Ho wazibonakalisa ukuba ngumkhonzi obalaseleyo kwiNkosana uZhu Di. Waba nekhono kwezobugcisa bemfazwe kunye nokudibanisa kwaye wakhonza njengegosa lenkosana. U-Zhu Di wabizwa ngokuthi uMa Ho njengoCheng Ho kuba ihashe lethenwa labulawa ekulweni ngaphandle kwendawo ebizwa ngokuthi yiZhenglunba. (U-Cheng Ho naye u-Zheng He kwiinguqulelo zePinyin zesiTshayina kodwa ubizwa ngokuba yi-Cheng Ho).
U-Cheng Ho wayaziwa nangokuthi ngu-San Bao okuthetha "amatye amathathu."
U-Cheng Ho, owathiwa ube ziikubhite ezisixhenxe ubude, wanikwa amandla amakhulu xa uZhu Di waba ngumbusi ngo-1402. Ngomnye kamva, uZhu Di wamisela uCheng Ho ummiselo kwaye wamyala ukuba abekelele ukwakhiwa kweFleet Fleet ukuze ahlolisise ulwandle eChina.
I-Admiral Cheng Ho yayingumthenwa wokuqala oqeshwe kwindawo ephakamileyo yempi e-China.
Uhambo lokuqala (1405-1407)
IFleet yokuqala yeFleet yayineenqanawa ezingama-62; ezine zineemithi ezinkulu zeenkuni, ezinye zezona zinkulu kunakekwa kwimbali. Babenokuba ngamamitha angama-122 ubude kunye no-160 ububanzi (ububanzi beemitha ezili-50). Ezi zine ziyi-flagship zeenqanawa ezingama-62 ezihlanganiselwe eNanjing ngasemfuleni waseYangtze (Chang). Ukufakwa kwinqwelo-mafutha yayiyi-33-foot (103-meter) iinqanawa ezihamba ngehashe ezingazange zithwele ngaphandle kweehashe, iinqanawa zamanzi ezithwala amanzi aphelileyo kubasebenzi, ukuthuthwa kwamagosa, iinqanawa zokunikezela, kunye neempahla zemfazwe ngenxa yezidingo ezikhuselayo nezikhuselayo. Iinqanawa zazaliswa ngamawaka eetoni zesiTshayina ukuthengisa nabanye ngexesha lohambo. Ekubeni kwe-1405, le nqanawa yayilungele ukuqala ngamadoda angama-27,800.
Le nqanawa isebenzisa ikhampasi, eyakhiwe eChina kwikhulu le-11, ukuhamba. Izibonda ezithweswe iziqhumiso zatshiswa ukuze zilinganise ixesha. Ngenye imini yayilingana no-10 "ulindi" lweeyure ezingama-2.4 nganye. Abafudumi baseShayina baqaphele ukuhamba ngokujonga i-North Star (i-Polaris) eNyakatho yeNtlabathi okanye kwi-Southern Cross kwi-Southern Intelphere. Iinqanawa zeFleet Fleet zaxhunyana kunye nokusetyenziswa kweeflegi, izibane, iintsimbi, amajuba, amajuba, kunye neebhanki.
Ukuya kohambo lokuqala loFakeet Fleet kwakunguCalicut, eyaziwa njengeziko elikhulu lokurhweba elunxweme elisentshonalanga yeIndiya. I-Indiya ekuqaleni "yafunyanwa" ngumhloli wamazwe waseTshayina uHsuan-Tsang kwinkulungwane yesibhozo. Le nqanawa yema eVietnam, eJava naseMalacca, yaza yaya entshonalanga ngaphesheya kweLwandle lwaseNdiya eya eSri Lanka naseCalicut naseCochin (izixeko eziselunxwemeni olusentshonalanga yeIndiya). Bahlala eNdiya ukuba baqeshwe kwaye bathengise ukusukela ekupheleni kwe-1406 ukuya entwasahlobo ka-1407 xa basebenzisa ukutshintsha kwexesha elide ukuya kwinqanaba elisekhaya. Ngethuba lokubuya, iFleet Fleet yaphoqelelwa ukulwa neenqanawa ngaseSumatra ngeenyanga eziliqela. Ekugqibeleni, amadoda kaCheng Ho akwazi ukuthatha inkokheli ye-pirate amthabise kwisikhululo saseNtshonalanga saseNanjing, efika ngo-1407.
Uhambo lwe sibini (1407-1409)
Uhambo lwesibini lwe-Fleet ye-Treasure yabuyela e-India ngo-1407 kodwa u-Cheng Ho akazange alawule olu hambo.
Wahlala eChina ukuba alungise ukulungiswa kwetempile kwindawo yokuzalwa yodadekazi oyithandayo. Amajelo aseTshayina ebhodini ancedisa ukuqinisekisa amandla okumkani waseCalicut. Le nqanawa yabuya ngo-1409.
Uhambo lwesithathu (1409-1411)
Uhambo lwesithathu lwenqanawa (i-Cheng Ho yesibini) ukusuka ku-1409 ukuya ku-1411 yayineenqanawa ezingama-48 kunye namadoda angama-30 000. Kwalandela ngokulandelelana kwindlela yohambo lokuqala, kodwa i-Treasure Fleet yamisa i-entrepots (iindawo zokugcina impahla) kunye ne-stockades endleleni yayo ukuze iququzelele ukurhweba nokugcina impahla. Ngehambo lwesibini, uKumkani waseCeylon (eSri Lanka) wayenobundlobongela; U-Cheng Ho unqobile umkhosi wamkhosi waza wamthabatha ukumkani ukuba amthabise eNanjing.
Uhambo lwesine (1413-1415)
Ngasekupheleni kwe-1412, u-Cheng Ho walelwa nguZhu Di ukuba enze uhambo lwesine. Kwakungekho ngo-1413 ngasekuqaleni kwe-1414 ukuba uCheng waqalisa ukuhamba kwakhe kunye neenqanawa ezingama-63 kunye namadoda angama-28,560. Injongo yalolu hambo yayiza kufikelela kwiGulf yasePersi eHormuz, eyaziwa ngokuba yinto edityanisiweyo yobutyebi kunye neempahla, kuquka iiparele kunye namatye anqabileyo ayenqwenela ngumlawuli waseTshayina. Elihlobo le-1415, iFleet Fleet ibuyele ngexabiso lempahla yezorhwebo esuka kwi-Persian Gulf. Amashishini aloo thumela ahamba ngeenqwelo ezisemzantsi ngaselunxwemeni lwaseAfrika phantse nakumazantsi njengeMozambique. Ngethuba lohambo ngalunye lweehambo zeCheng Ho, wababuyisa amadiplomethi avela kwamanye amazwe okanye wakhuthaza abathunywa ukuba baye kwikomkhulu iNanjing ngokwabo.
Uhambo lwesihlanu (1417-1419)
Uhambo lwesihlanu lwayalelwa ngo-1416 ukubuyisela amanxusa ayefikile kwamanye amazwe.
UFleet Fleet wasuka ngo-1417 waza watyelela iGulf yasePersian kunye nolunxweme lwimpuma lwaseAfrika, ukubuyisela iindwendwe endleleni. Babuyela ngo-1419.
Uhambo lwesithandathu (1421-22)
Uhambo lwesithandathu lwaluqaliswe entwasahlobo ka-1421 kwaye luye lwavakashela iSoutheast-Asia, India, i-Persian Gulf kunye ne-Afrika. Ngelo xesha, iAfrika yayicingelwa ngokuthi "i- El Dorado " yaseTshayina, ngumthombo wobutyebi. U-Cheng Ho ubuyile ngasekupheleni kwe-1421 kodwa intsalela yale nqanawa ayizange ifinyelele eChina kwaze kwaba ngo-1422.
UMlawuli uZhu Di wafa ngo-1424 waza unyana wakhe uZhu Gaozhi waba ngukumkani. Wakukhansela uhambo lweeFleet ze-Treasure waza wayala abakhi bemikhumbi nabanomkhumbi ukuba bayeke umsebenzi wabo babuyele ekhaya. U-Cheng Ho wamiselwa umphathi wamkhosi weNanjing.
Uhambo lweShenxe (1431-1433)
Ukhokelo lukaZhu Gaozhi aluzange luhlale ixesha elide. Wafa ngo-1426 eneminyaka engama-26. Unyana wakhe kunye nomzukulu kaZhu Di uZhu Zhanji wathatha indawo kaZhu Gaozhi. UZhu Zhanji wayefana noyise wakhe kunokuba uyise wayeneminyaka eyi-1430 waza waphinde wahamba nohambo lwe-Treasure Fleet ngokuyalela u-Cheng Ho ukuba aphinde aqhubeke nomsebenzi wakhe njengenqanawa kwaye enze uhambo lwesikhombisa enzame yokubuyisela ubudlelwane obunokuthula kunye nezikumkani zaseMalacca naseSiam . Kwathatha unyaka ukukhawuleza uhambo olwaluhamba njengesithuthi esikhulu kunye neenqwelo ezili-100 kunye namadoda angama-27,500.
Ngethuba lokubuya ngo-1433, uKheng ukholelwa ukuba ufile; abanye bathi ufile ngo-1435 emva kokubuyela eChina. Nangona kunjalo, ixesha lokuhlola iChina likhawuleza njengoko abalawuli abalandelayo banqabela ukurhweba kunye nokwakhiwa kweenqanawa ezihamba olwandle.
Kusenokwenzeka ukuba i-detachment enye yee-Cheng Ho iinqwelo zokuhamba ngomkhumbi waya ngasenyakatho ye-Australia ngenye yeehambo ezisixhenxe ezisekelwe kwizixhobo zaseTshayina ezifunyenweyo kunye nembali yomlomo ye-Aborigine.
Emva kohambo olu-7 lwe- Cheng Ho kunye ne-Fleets ye-Treasure , iiYurophu zaqala ukuya e-China. Ngo-1488 uBartolomeu Dias wajikeleza iKapa yeGood Hope e-Afrika, ngo-1498 uVasco da Gama wafika kwisixeko saseChina esithandayo ngokuthengisa, yaye ngo-1521 uFerdinand Magellan wagqiba waya e-Asiya ngokuhamba ngentshonalanga. Ukuphakama kweTshayina eLwandle lwaseNdiya kwakungenakuqhathaniswa kwaze kwafika ngenkulungwane ye-16 xa isiPutukezi safika saza sazinzisa iinqoloni zawo ngasemlanjeni wase-Indian Ocean.
Ukudibanisa neeKlabhu zokhuni eGoli
Iingcamango Zesipho kwi-Classic Rock Fans
Iingcamango zobomi bokuqala - iVents Hydrothermal
Indlela yokwenza utshintsho kwi-MCAT yokubhalisa
Yintoni i-Brown Algae?